အ လွမ်း တံ ခါး ဖွင့် မိ ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အ လွမ်း တံ ခါး ဖွင့် မိ ခြင်း
အ လွမ်း တံ ခါး ဖွင့် မိ ခြင်း
Posted by aye.kk on Jun 7, 2012 in My Dear Diary | 12 comments
ကြီး မား လှ တဲ့ အ မေ့ ကျေး ဇူး တွေ က မြင့် မိုရ် မျှ မ က…..
အ မေ့ ကို လွမ်း တဲ့ အ ခါ ၊ အ လွမ်း တံ ခါး ဖွင့် မိ ခြင်း ပါ ပဲ….
အ မေ , ….အ မေ ,…
ကျ မ မှတ် မိ တတ် ခါ စ အ ရွယ် လေး ထဲ က ၊ ထ မင်း ခွံ့ ကျွေး ခဲ့ ပါ တဲ့ အ မေ……၊ ရေ ချိုး ပေး ခဲ့ ပါ တဲ့ အ မေ… ၊ ခြေ သည်း လက် သည်း လေး များ နာ ကျင် မှု မ ရှိ ရ လေ အောင် ၊ ဂ ရု တ စိုက် ညှပ် ပေး ခဲ့ ပါ တဲ့ အ မေ…။
ငါး နှစ် သ္မီး အ ရွယ် လေး ထဲ က စ လို့ ၊ ၀ါ တွင်း ဥ ပုသ် ရက် တွေ တိုင်း ၊ ကျ မ နေ ထိုင် ကြီး ပြင်း လာ ခဲ့ တဲ့ ဇာ တိ ချက် ကျွေ မွေး ရပ် မြေ လေး က ၊ မြို့ပေါ် ရပ် ကွက် က ဘုန်း ကြီး ကျောင်း တွေ တ ကျောင်း မှ မ ကျန် ရ လေ အောင် လက် ဆွဲ ခေါ် တတ် ပါ တဲ့ အ မေ..။
ကျိုက် ပေါ လော မှဲ့ ရှင် တော် ဘု ရား မှာ ၊ ဥ ပုသ် နေ့မှာ ပြု လုပ် တဲ့ ၊ တ ရား ပွဲ တွေ ရှိ တဲ့ အ ခါ တိုင်း ငါး ပါး သီ လ ခံ ယူ စေ လို့ ၊ တ ရား နာ တတ် ခိုင်း ပါ တဲ့ အ မေ..၊ ဒါ တင် ပဲ မဟုတ် သေး ..၊ ည နေ ခင်း တ ရား ပွဲ ပြီး ဆုံး တဲ့ အ ခါ တိုင်း ၊ ဘု ရား တန် ဆောင်း နံ ရံ ဆေး ရေး ပန်း ချီ ကား ချပ် ရုပ် ပုံ ကြီး တွေ လက် ညိုး ထိုး ပြီး ၊ ရေး ထိုး ထား တဲ့ စာ တွေ ဖတ် ခိုင်း တတ် ပါ တယ် ၊ မ ဖတ် တတ် ခင် တုံး အ ရွယ် က လေး က ၊ အ မေ က ဖတ် ပြ လို့၊ အ ပြစ် ပြု မိ လို့ င ရဲ ကျ ခံ ရ တဲ့ အ ကြောင်း များ ကို ၊ နား ရည် ၀ အောင် အ မြဲ ပြော ပြ တတ် ပါ တဲ့ အ မေ…။
အ မေ့ ကျေး ဇူး ကြောင့် သာ ……
အ ပြစ် ပြု မိ ရ မှာ ကြောက် လို့ ၊ ပု ရွက် ဆိတ် ခါ ချဉ် နီ ကောင် အ ကိုက် ခံ ရ ရင် တောင် ၊ မ သတ် ရဲ ခဲ့ ပါ ဘူး ။ ယ နေ့တိုင် ထိ လည်း ၊ နာ နာ ကျင် ကျင် ဘယ် သူ့အ ပေါ် ကို မျှ ၊ ကျ မ ကိုယ် ထိ လက် ရောက် မ ကျူး လွန် ရဲ ခဲ့ ပါ ဘူး…။
ဆယ် ကျော် သက် အ ရွယ် ရောက် လာ ပြန် တော့ လည်း ၊ ၀ါ တွင်း ကာ လ တွေ အ တွင်း အ ဖိတ် နေ့တွေ မှာ ဥ ပတ် သ ကာ တန်း ရှည် လှည့် လာ ရင် ၊ အာ ရုံ ဆွမ်း ၊ နေ့ဆွမ်း တွေ အ တွက် ၊ အ ချို ပွဲ တွေ မ ပြတ် တမ်း လောင်း လှူ ခိုင်း ပါ တယ် ။ လှူ တဲ့ အ ခါ လည်း ၊ ကိုယ် စီး ထား တဲ့ ဖိ နပ် လေး ကို ချွတ် ပြီး ၊ ဥ ပတ် သ ကာ ဆွမ်း ပု ဂံ ခွက် လေး ထဲ မ ဖိတ် မ စင် ရ လေ အောင် ၊ လောင်း ထည့် ပုံ က လေး အ စ ၊ သင် ပြ ခဲ့ ပေး တဲ့ အ မေ..။
ကိုယ် ရဲ့ ကု သိုလ် လုပ် အား ဒါ န ပေး ရ စေ လို ခဲ့ ပါ တဲ့ အ မေ..၊ လှူ ဖွယ် ပစ္စည်း အ ချို ပွဲ တွေ ၊ ရက် သတ္တ တ ပါတ် အ တွင်း အ ထား ခံ နိုင် စေ တဲ့ ၊ က တွတ် ယို ၊ နာ နတ် ယို ၊ ဇောင်း ယား ယို ၊ ပိန္နဲ ယို ၊ ဒူး ရင်း ယို ၊ အ စ ရှိ တဲ့ ယို မျိုး စုံ ၊ မ ရိုး နိုင် အောင် အ မျိုး ပြား များ စွာ လောင်း လှူ ဖို့အ တွက် ၊ အ မေ နဲ့အ တူ စ နစ် တ ကျ ၊ ယို ထိုး တတ် အောင် ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ သင် ပြ ပေး ခဲ့ တဲ့ အ မေ..။
မိုး ဦး ကာ လ ၊ ကျ မ တို့မြို့ရဲ့ မြို့ နယ် ထဲ က ဒေ သ ထွက် ၊ က တွတ် သီး တွေ ကို ၊ အ ချိန် (၅) ပိဿာ ၊ (၁၀) ပိ ဿာ မှာ ယူ ကာ ၀ယ် လို့ ၊ ယို ထိုး ပြီး မြို့ပေါ် ဘုန်း ကြီး ကျောင်း တွေ ၊ တ ကျောင်း မှ မ ကျန် ရ လေ အောင် ၊ ၀ါ တွင်း (၃) လ မ ပြတ် ရ အောင် ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ သွား ရောက် ပြီး ၊ ကျ မ တို့ ညီ အစ် မ ကို လက် ဆွဲ ခေါ် လို့ အ မြဲ လှူ တတ် ပါ တဲ့ အ မေ..။
ဇောင်း ယား ပင် အ ချို မျိုး ၊ အချဉ် မျိုး ၊ နှစ် မျိုး အ ပြား အိမ် ခြံ နောက် ဖေး ၀န်း ထဲ မှာ ၊ အ ဖေ က စိုက် ထား ပေး လို့ ၊ မျိုး ကောင်း ပြီး ပင် လုံး ခဲ ညွတ် အောင် သီး ပါ တယ် ၊ ၀င်း ဖန့်ဖန့် အ ရောင် တွေ့ ရင် အ မေ က ခူး ၊ ကျ မ တို့က ကောက် ယူ ပြီး သ တ္တု ဇောက် ဇ လုံ ကြီး တွေ ထဲ ထည့် ၊ အ သီး တွေ ရေ စင် အောင် ဆေး ကြ ရ တာ..။
ကျ မ တို့အ မေ နဲ့ အ တူ ၊ ဒါး ပါး လေး တွေ ကိုယ် စီ ကိုင် ပြီး ၊ ရေ ဆေး ပြီး သန့်စင် ထား တဲ့ ဇောင်း ယား အ သီး တွေ ကို ၊ ဖင် ထိတ် က လေး လှီး ထုတ် ၊ အူ တိုင် အ စေ့ ဖယ် ရှား ပြီး ၊ သူ့အ မြှောင်း လိုက် လေး အ တိုင်း လိုက် လှီး ပေး ရ ၊ လှီး ပြီး သား တွေ ကို အ ခြား သတ္တု ဇောက် ဇ လုံ ကြီး ထဲ ထည့် ပေး ရ တာ ..။
အ ရည် ရွှမ်း တဲ့ ဇောင်း ယား သီး ၊ လှီး ထား ပြီး သား တွေ ကို အ မေ က ထုံး ရေ ကြည် လေး အ နည်း ငယ် ထည့် ပြီး ၊ နှစ် နာ ရီ သုံး နာ ရီ မျှ လောက် ကြာ အောင် ခ ဏ ထား ၊ ပြီး ရင် သ ကြား ရည် စစ် ပြီး သား ကို ညောင် စီး ကျ လာ တဲ့ အ ထိ (၀ါ) စေး ပြစ် ပြီး ကပ် လာ တဲ့ အ ထိ ထိုး ပြီး မှ သာ ၊ အ အေး ခံ ထား တာ..။
ထိုး ပြီး သား ဇောင်း ယား ယို ကို ဖန် ဘူး ကြီး တွေ နဲ့ ထည့် ပြီး ၊ ၀ါ တွင်း ဥ ပုသ် , အ ဖိတ် ကု သို လ် ရ အောင် ၊ သား သ္မီး တွေ ပါ ကု သိုလ် မျှ ဝေ ပါ ၀င် ခံ စား ရ လေ အောင် သင် ပေး ရှာ တဲ့ အ မေ..။
က တွတ် သီး မှည့် ပေါ် ချိန် ၊ အိမ် ခြံ နောက် ဖေး မှာ အ ဖေ စိုက် ထား တဲ့ ပိန္နဲ (အိမ်ပျော့၊ အိမ်မာ) ၊ ဒူးရင်း သီး ပေါ် ချိန် များ….
လှူ ဖို့အ တွက် ဆို ရင်..
မ မော နိုင် , မ ပမ်း နိုင် သား သ္မီး တွေ ကို ၊ ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ ပြု လုပ် တတ် အောင် သင် ကြား ပြ သ ပေး ပါ တဲ့ အ မေ…၊ ကု သို လ် ရ ယူ တတ် အောင် လမ်း ညွန် ပြ သ ပေး တတ် တဲ့ အ မေ..။
လွမ်း တယ် , အ မေ …..
အ မေ့ကို လွမ်း တိုင်း ..
အ လွမ်း တံ ခါး ဖွင့် မိ ခြင်း ပါ အ မေ…
မ ကုန် ခမ်း နိုင် တဲ့ အ မေ့ ရဲ့ကြီး မား လှ တဲ့ မ ဟာ မေ တ္တာ မြင့် မိုရ် တောင် ကို …
အ ရမ်း လွမ်း တယ် အ မေ ရယ်..။
အ မေ့ ကို………လွမ်း ရ တိုင်း။
အ လွမ်း တံ ခါး ဖွင့် ထား မိ ပါ တယ် အ မေ ။။။
အန်တီအေးရဲ့ မေမေက တကယ့်ကို အိမ်ရှင်မကောင်းပီသပြီး သားသမီးတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်တတ်လိုက်တာ။
အခုရော အန်တီအေးအိမ်မှာ စားပင်တွေ စိုက်ထားသေးလား။ အဲ့ဒီဖက်က ရာသီဥတုကောင်းတော့ အပင်တွေဖြစ်မယ် ထင်တယ်နော်။
မြင့်မိုရ်တောင်ဦး မကကျူးသာ ကျေးဇူးအရှင်
မွေးသမိခင်ရဲ့ မေတ္တာတွေကို ခံစားနားလည်
အန်တီလည်း အဲ့လို မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့
အမေနဲ့ တွေ့ရတာ အရမ်းကံကောင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ…
အမေ ကိုယ့် ဘာသာ၊သာသနာ တည်တံ့အောင် ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း
ပုံပြင်တွေ(ဇာတ်ကြီး ၁၀ ဘွဲ့)ပြောပြတတ်တဲ့အမေ၊ငယ်ငယ်ထဲက ငါးပါးသီလထဲက
တစ်ခုခုကျူးလွန်မိရင် ညရောက်ရင် (ဥပမာ ခဲတံလေးယူလာမိရင် နားရွက်ကိုသေခါနီးမှာ
ကိုက်ဖြတ်တဲ့ အကြောင်းပြောပြတဲ့ အမေ)။ညအိပ်တိုင်း စောင်ထထခြုံပေးဖို့အတွက် မအိပ်တဲ့အမေ။
လိုအပ်လာရင် သားအတွက်ဆို အာဇာနည်ရဲဘော်တွေထက် သတ္တိမခေတဲ့အမေ။
အစ်မအေး နဲ့ အတူ အမေ့ကို ဝင်လွမ်းသွားပါတယ်။
အစ်မအေး ကိုယ်တိုင်လဲ အစ်မအမေလို မိခင်ကောင်း ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ပါတယ်။ :-)
အမေ့ရဲ့ မေတ္တာမိုးကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ကြီးကိုတွေ့ ခွင့်ရလိုက်သလိုခံစားရပါတယ်..။
ရွှေကြည်လည်း အမေ့ကိုအရမ်း ချစ်တယ်။ လေးစားတယ်။
အဖေ့ကိုလည်းချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေ့ကိုပိုချစ်တယ်။
အန်တီအေးပြောတဲ့ မိခင်ကောင်းဖြစ်အောင် အခိုင်လည်းကြိုးစားပါဦးမယ် ……..
ကျွန်တော်လည်း အမေ ချစ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ပါ။
အချိန်ပိုပေးပြီး ဂရုစိုက်ဖို့ သတိပေးသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်